NVIDIA na-ekwupụta nnweta nke NVIDIA SHIELD Pro | Gam akporosis
NVIDIA SHIELD Pro ọhụrụ dị ugbu a na 500GB HDD na microSD
Na CES 2017 na Las Vegas na Jenụwarị, NVIDIA kwupụtara a nnukwu nnabata na SHIELD ọzọ. Enwere m ọhụụ ọhụụ gam akporo TV, ọ bụ ezie na ọ nwere ọtụtụ myirịta na nke gara aga, yabụ n'ọtụtụ ụzọ, ọ mebeghị ihe a tụrụ anya ya.
Ọhụrụ NVIDIA SHIELD nwere atụmatụ dị oke mkpa ma ọ bụ oghere microSD. A ike dịkwuo nchekwa nke a ngwaọrụ nke dị oké mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ, na ndị ọzọ mere na a console nke a ukwuu nke anyị nwere ọtụtụ egwuregwu. Ọ bụ ugbu a ka NVIDIA kwuputara na ọ dị ugbu a ọhụụ nke SHIELD Pro, nke dị ka nke ochie, ọ bụ ezie na ọ nwere oghere microSD.
Enwere ụfọdụ akụkụ nke onwe ha bụ ihe ngọpụ kachasị mma iji nweta ụdị ọhụụ nwere ike ịbụ nwelite ngwaike dị ọcha. Ọhụrụ SHIELD Pro dị ka njikọta n'etiti SHIELD ọhụrụ na ochie SHIELD Pro. O nwere atumatu ohuru, ihe ohuru na akuko ohuru nke gam akporo TV, mana o na adi otu nha na ebe nchekwa di ka ihe nlere gara aga.
Ihe nke a putara bu na o nwere 500 GB diski ike kama 16 GB eMMC na oghere maka micro SD iji mee ka ikike nchekwa ahụ dịkwuo elu. Ya mere, anyị nwere SHIELD Pro dịka ihe nkesa mgbasa ozi ụlọ kacha mma. Ọ bụkwa usoro zuru oke maka ịgba egwu na otu nke anyị nwere ike ichefu maka nchekwa ma ọ bụ bụrụ ndị na-adọkpụ na mpụga USB siri ike.
Gụnyere nke onye njikwa SHIELD ọhụrụ na njikwa ntanetị, gbakwunye atụmatụ ọhụụ na-adọta onwe ya site na inwe Google Assistant (n'agbanyeghị uru a). NVIDIA SHIELD Pro ọhụụ na-akwụ ụgwọ ugbu a na $ 299 ma gụnye ma onye nchịkwa ma onye dịpụrụ adịpụ. Maka ndị na-egwu egwuregwu kachasị, ị nwere ike ile anya na Just Cause 2 na Deus Ex Human Revolution ka ha na-eto eto nke GeForce UGBU egwuregwu vidio site na iyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » NVIDIA SHIELD Pro ọhụrụ dị ugbu a na 500GB HDD na microSD
Ogbe 1989 dijo
Kedu ihe ị bụ akpa maka m !!!! Ọ bụrụ na ihe 2017 Version a na-efunahụ ya na 2015 bụ na ọ pere mpe, ọdụ MICROSD na MICROUSB furu efu na usoro abụọ na 16GB na 500GB ma ọ ga-ahapụ naanị 2 USB, Ethernet na HDMI. Salu 2
A na-edozi nhazi na akụkụ nke Galaxy S8 na S8 Plus
Google Gosiputa G Suite Enterprise, yana nchekwa na ndozi njikwa